Daawoyinka PCT Maandooriyeyaasha taxanaha ah - Kaadi AASraw
/ Products / Mukhaadaraadka PCT
Waxaannu nahay dawooyinka loo yaqaan "PCT Drugs", "PCT Drugs powder for sale", sida aan u ballan qaadnay, dhammaan budhcadayada PCT waa kuwo aan ka yarayn 98%.
Daawooyinka mukhaadaraadka PCT
Budada dawooyinka PCT macnaheedu waa daawada loogu talagalay daaweynta wareegga dambe. Daweynta wareega dambe waa hab loo adeegsado daroogo oo ka shaqeynaya habab kala duwan oo isku dayaya in lagu xasiliyo oo dib loo soo celiyo hormoonnada isticmaalaha celcelis ahaan marka marxaladda anomaliyadeed ee anabolic androgenic steroid joogsatay.
Marka uu isticmaalaha joojiyo isticmaalka steroids anabolic androgenic waxay ku tageen xaalad ah in wax soo saarkooda tijaabada ee dabiiciga ah la joojiyay, marmarka qaarkood si xun. Intaa waxaa dheer, heerarka steroids ayaa waligood hoos u dhigaya nidaamkooda, taasoo ka dhigaysa isticmaalaha ku jira wareegga dambe ee wareejinta gobolka, taas oo laga yaabo inay ka tarjumeyso kartidooda si ay u ilaaliso murqaha oo la helo muddada wareegga. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, way fududahay in la soo gabagabeeyo waxaan rabnaa in aan helno hab lagu soo celiyo waxsoosaarka tijaabada ah ee tijaabada ah si loo keeno jawi ka wanaagsan caafimaadka guud iyo in la ilaaliyo nudaha murqaha.
Isticmaalka calaamadaha Clomiphene (budada clomid) iyo tamoxifen (budada nolvadex) ayaa loo adeegsan karaa wareegga dambe si loo caawiyo soo celinta waxsoosaarka caadiga ah ee dadka isticmaala testosterone. Sababtoo ah labaduba waxay awoodaan in ay xannibmaan estrogen ee hypothalamus iyo pituitary, taas oo joojinaysa diidmada fikradaha diidmada ah, waxaan leenahay daawooyin si fiican u kordhi kara FSH (hormoon kicinta hormoonka) iyo LH (luteining hormone) ee jirka labka ah. Kordhinta LH waxay gacan ka geysan kartaa kicinta unugyada Leydig ee tijaabooyinka si ay u soo saaraan testosterone dheeraad ah.
Dad badan ayaa ku helaya iyagoo isticmaalaya budada nolvadex iyagoo ku filan oo ku filan si ay uga soo kabtaan wareegtadooda. Qaarkood waxay doorbidaan inay isticmaalaan labada daroogo si ay u daboolaan dhammaan xaglaha. Waxaa muhiim ah in la ogaado in sunta nolvadex ay tahay mid aad u qoto dheer oo lagu kicinayo kororka LH, oo ah milligram xagga migratiga, marka la barbar dhigo budada caloosha. Sidoo kale, isticmaalayaasha badani waxay ka cabanayaan dhibaatooyinka ka yimaada budada qalabka sida sida muuqaalka muuqaalka iyo isbedelka niyadda.
Qiyaasta qiyaasta daaweynta ee PCT:
Maalinta 1 100mg
Kadib maalmaha 10 60mg
Kadib maalmaha 10 40mg
Qodobka kor ku xusan waa qandaraas muunad ah oo loo adeegsan karo. Sida iska cad wareegga iyo xuduudaha kale waxay bedeli karaan qiyaasta iyo muddada gogoldhigga wareeggaaga.
Sida kor ku xusan, dadka isticmaala badanaa waxay jecel yihiin in ay isticmaalaan labadaba nolvadex iyo shaybaarka dhuxusha si ay u daboolaan dhammaan xaglaha.
Qiyaasaha budada nolvadex iyo budada dhoobo ee loo yaqaan "PCT":
Maalinta 1 Clomid budada 250mg + budada Nolvadex 60mg
Kadib kaddib 10 maalmaha Clomid budada 100mg + Nolvadex budada 40mg
Kadib kaddib 10 maalmaha Clomid budada 50mg + Nolvadex budada 20mg
Habkani waa inuu caddeeyaa. Taas oo la yiraahdo, sida mawduucyada kaliya ee budhcad-badeedka budada ah, ma aha mid lagu dul dhigay dhagax. Cirbadaha badan ee xannibaya waxay u baahan karaan qiyaaso sarreeya ama muddo dheer oo loo isticmaalo si ay u keenaan saameynta la rabo.
Marka aad bilowdo nidaamka PCT waxay ku xiran tahay xeryaha loo maamulay wareegga. Fiiri dhammaan istiraatiijiyooyinka aad isticmaashay inta lagu jiro wareeggaaga shaxda hoos ku xusan, oo fiiri daroogada leh taariikhda ugu dheer ee bilawga ah ka dib markii ugu dambeysay. Tani waa si aanan u bilaabin nidaamka PCT marka laga yaabo inay wali sii ahaadaan heerarka sare ee isdifaaca nidaamka, taasoo ka dhigaysa PCT inay noqoto qashin ilaa heerarka hoos u dhaco.
Sababta Sababtoo ah Jimicsi-Isticmaalayaasha Isticmaal budada Isku-jira
Budada kuleylka waa magac guud oo loogu talagalay Clomiphene Citrate waana oolojiin ah synthetic. Waxaa loo qoraa caafimaadka si ay u caawiso ugxanta haweenka bacriminta yar. Magac kale oo kale waa Serophene.
Isticmaalidda steroids badankood, gaar ahaan xuubisyada, waxay keenaan in la joojiyo wax soo saarka jirka ee testosterone. Marka jir-dhisaha uu ka soo wareego wareegga steroid, waxsoosaarka testosterone dabiiciga ah eber waa heerarka steroids ee dhiigga laga qaado ayaa hoos u dhacaya. Tani waxay ka baxaysaa saamiga catabolic: hormoonka anabolic ee dhiigga sarreeya, markaa jidhku wuxuu ku jiraa xaalad la yiraahdo, iyo natiijada, badanaa unugyada muruqyada ee laga helay wareegga hadda waa la lumayaa.
AASraw wuxuu bixiyaa noocyo kala duwan oo budada ah ee budada ah ee PCT, Tamoxifen Citrate / Nolvadex, Kiniiniga Clomiphene / Kalluunka Clomid, Exemestane / Aromasin, Fluoxymesterone / Halotestin, Anastrozole / Arimidex iyo Letrozole / Femara. Waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad alaabtaas ka qaadato AASraw si aad u ilaaliso caafimaadkaaga.